Global Voices teny Malagasy » Fanentanana CCTV mamely ny Google.cn · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Jona 2018 2:53 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Miranah
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora, Teknolojia
(Marihana fa efa tamin'ny volana Jiona taona 2009 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ny 18 Jona, namoaka tatitra iray tao amin'ny pejiny voalohany izay miampanga ny Google.cn amin'ny fampielezana votoaty vetaveta ny Foibe Fitaterana momba izay Vaovao Tsy manara-dalàna amin'ny Aterineto ao Shina  (CIIRC) .
Hoy ny tatitra, mitondra ny lohateny hoe “Manameloka mafy ny google noho ny fanapariahana vaovao tsy mendrika sy maloto”:
Vao haingana ny CIIRC no naharay sy nanamarina ny fitarainan'ny vahoaka manoloana ny google.cn noho ny fanaparitahana vaovao vetaveta sy baranahina. Manitsakitsaka ny fitsipika tsara petraky ny governemanta ny fihetsika toy izany. Ankoatra izany, mifanohitra amin'ny fitsipi-pitondran-tena imasom-bahoaka sy ny fahalianan'ny fiarahamonina izany.
Naorina tamin'ny 10 jona 2004, tohanan'ny Fiarahamonin'ny aterineto ao Shina sy tohanan'ny Minisiteran'ny Indostrian'ny Fampahalalam-baovao, ny Minisiteran'ny Filaminam-bahoaka, ary ny Biraom-baovaon'ny Filankevi-panjakana ao amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina ny (CIIRC).
Vetivety dia nanasongadina ny fanamarihan'ny CIIRC ny CCTV tamin'ny vaovao hariva ary nanohy ny tantara tao amin'ny “resadresaka ifantohana”. Nahasarika fanehoan-kevitra samihafa avy amin'ny mpampianatra, ray aman-dreny, mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo sy tanora manam-pahaizana manohitra ny google.cn ny famoahana ny vaovao
Jason Ng avy any Kenengba nandika ny tafatafan'ny mpianatry ny anjerimanontolo  ao amin'ny fizarana faharoa amin'ny tantarany momba ny fanadihadiana ny tetikady fampielezan-kevitry ny CCTV:
Ny fahatsapako dia manapoizina tanteraka ny fampahalalam-baovao vetaveta ao amin'ny aterineto, indrindra fa amin'ny alàlan'ny rohy google.cn, mety mbola hihamafy ny vokany manapoizina.
Ohatra, manana mpiara-mianatra aho. Toy ny tanora hafa rehetra izy, tena liana amin'ny zavatra toy izany. Noho izany dia nitsidika tranonkala vetaveta izy ary very saina tao. Taorian'izay dia nanadio ny tranonkala vetaveta ny governemanta ka tsy afaka nitsidika izany intsony izy. Nihatsara kokoa izy avy eo. Na izany aza, nahita izy avy eo fa afaka manokatra karazana tranonkala indray amin'ny alàlan'ny milina fikarohana Google.cn. Manana karazana rohy be dia be ny Google.cn. Niharatsy indray ny momba azy avy eo.
Vaovao farany (19 Jona 3:31 hariva): nilaza ny vaovao farany  avy amin'ny twitter fa mpikambana ao amin'ny CCTV ilay mpianatry ny oniversite Gao Ye. Tao amin'ny rindrin'ny Xiaonei (endrika Facebook Shinoa), nikarajia tamin'ny ekipa mpanao gazety izy. Amin'izao fotoana izao satria fantatra ny momba azy, nanomboka nanaisotra ny zavatra nosoratany izy. Ity ambany ity ny pikantsary tamin'ny resadresaka talohan'ny namafana azy:
Nanamarika ihany koa i Jason fa niezaka ny hampiroborobo ny “Tohodrano Maitso” ny CCTV taorian'ny fanakianana rehetra tamin'ny rindrambaiko. Ity ny fanazavany:
Ho fanoherana ny tsikera rehetra, ny fomba tsara indrindra dia tsy ny fanakanana ny tatitra sy ny fampahalalam-baovao rehetra, fa mamorona karazana tatitra hafa … Ahoana no ahafahana mamorona tontolo satria feno loza, vetaveta ao anatin'ny fotoana fohy toy izany ny aterineto? Nanapa-kevitra ihany nony farany ny tonian-dahatsoratra mba hamaritra ny milina fikarohana.
Raha toa ka mikendry tranonkala marobe izy ireo, dia tsy haharesy lahatra. Tsy mitovy ny milina fikarohana, fidirana amin'ny aterineto izany ary afaka mahazo izay tadiaviny amin'ny alalan'ny milinia fikarohana ny mpiserasera.
Na dia izany aza, efa nandoa saram-piarovana 40 tapitrisa (fifanarahana amin'ny dokambarotra) tamin'ny CCTV ny Baidu , tsy afaka mamaritra azy intsony izy ireo. Noho izany, lasa lasibatra ny google.cn.
Bilaogera iray hafa, lyngle, nanipika ihany koa fa tsy ara-drariny ny nataon'ny CCTV tamin'ny google.cn ary nampitaha ny valin'ny fikarohana sary teo amin'ny google.cn sy ny baidu.com amin'ny fikarohana ny”mm” (manondro ny hoe tovovavy) izy . Ireto ambany ireto ny pikantsarin'ny fikarohany:
Valin'ny karoka sary “mm” tao amin'ny Google.cn
Valin'ny karoka sary “mm” tao amin'ny Baidu.com
Ao amin'ny twitter, maro ireo sioka milaza fa nanome torolàlana ho an'ireo tranonkala vavahadin-tserasera lehibe ny sampandraharahan'ny fampielezan-kevitra mba hampiroborobo ny vaovao ao amin'ny pejy voalohany. Misy ihany koa ny fanombantombanana fa fitaovana hanapariahana sivana ny fanoherana ny baranahiny:
huyong  CCTV fuck Google 再次证明，反低俗是手段，搞审查是目的。
Nampiseho ny fihetsiky ny CCTV tamin'ny Google fa fitaovana ho an'ny sivana ny fanoherana ny baranahiny.
Angamba tsy te-hahita ny google.cn manolotra tolotra SSL ho an'ny milina fikarohany intsony ny governemanta.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/21/121674/
 Foibe Fitaterana momba izay Vaovao Tsy manara-dalàna amin'ny Aterineto ao Shina : http://net.china.cn
 nandika ny tafatafan'ny mpianatry ny anjerimanontolo: http://www.kenengba.com/post/1173.html
 vaovao farany: http://twitter.com/wenyunchao/status/2233561902
 nampitaha ny valin'ny fikarohana sary teo amin'ny google.cn sy ny baidu.com amin'ny fikarohana ny”mm” (manondro ny hoe tovovavy) izy: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4fb6d5600100djra.html